Cawad oo si sharci darra ah u magacaabay Niman ay isku Jufo yihiin | KEYDMEDIA ONLINE
Cawad oo si sharci darra ah u magacaabay Niman ay isku Jufo yihiin
Wasiirada xukuumaddii kalsoonida lagala noqday ayaa bilaabay in ay xilal u magacaabaan xubnaha ay xigtada ama asxaabta yihiin, iyagoo ka faa'iideysanaya marxaladda kala guurka ah ee dalku haatan ku suganyahay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay Keymedia Online ogaatay sii-haya Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka faa'iideysanaya marxaladda kala guurka ah ee dalka ayaa xilal ka safay rag ay isku jufo iyo asxaab yihiin.
Wareegto ka soo baxday xafiiska Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa lagu sheegay in Wasiirka magacaabay sideed diblumaasi, kuwaas oo xogahayaal iyo la taliyaal ka noqonaya xarumaha safaaradaha dowladda Soomaaliya ee dalka dibaddiisa ah.
Sidoo kale xogta aan helnay ayaa sheegeyso in Cabdullaahi Cali Yuusuf oo qaraabo la ah Wasiirka, madaxna ka ahaa xaafiiskiisa loo magacaabay xoghaya koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Geneva-Switzerland.
Digreetada lagu magacaabay xubnahan ayaa laga dhigay 23-ka bishii hore ee July halka xukuumada kalsoonida lagala noqday isla bishii hore 25-keeda, waxa ayna ka bixitaanka kheyre Xukuumada Wasiirada qaar u noqotay fursad weyn.
Halkaan Hoose ka akhriso xubnaha la magacaabay.
Dagaallo dhex maray ciidamda dowladda iyo Ururka Al-Shabaab
Ciidamda dowladda ee fadhigoodu yahay deegaanada Galmudug ayaa dagaal kala hor yimid ciidamada Al-Shabaab ee ka dagaallama bartamaha Soomaaliya.